Ini handikwanise kukuudza maturusi ese andakamboshandisa kana kunyorera munguva yakapfuura yekunyora podcast mabvunzurudzo ari kure - uye ini ndaive nematambudziko nawo ese. Izvo zvaive zvisina basa kuti kunaka kwekubatana kwangu kwaive sei kana hunhu hwesimbi… zvinhu zvenguva pfupi zvekubatanidza uye odhiyo mhando kazhinji zvaigaro gadzira ini kukanda podcast.
Pandinorekodha kubvunzurudzwa, ini ndinogara ndichichengeta odhiyo kukombuta yemuno. Kana kubvunzurudza kwapera, Zoom inotumira kunze odhiyo kudhairekitori renzvimbo. Paunovhura dhairekitori rekuenda, iwe unowana yega yega nzira iri mune dhairekitori rakatumidzwa zita nemazvo uye ipapo yega yega nzira yemubatanidzwa inosanganisirwa: